Daahir Rayaale “Somaliland khayr baan u rajaynayaa, doorashadana kii ilaahayna gartay uu ku soo baxo” |
Daahir Rayaale “Somaliland khayr baan u rajaynayaa, doorashadana kii ilaahayna gartay uu ku soo baxo”
Hargeysa (estvlive) 07/02/2017
Madaxweynihii hore ee Somaliland Daahir Rayaale Kaahin, oo muddo dalka dibadiisa ku noolaa ayaa dalka dib ugu soo laabtay.
Wariyeyaal kaga hortagay madaarka magaaladda Hargeysa ee Cigaal international Airpor ayaa isku dayey inay wax ka waydiiyaan xaalada wadanku marayo, haseyeeshee wuu ka gaabsaday waxaanu ilaahay u baryey in dad iyo xawayaanka uu ilaahay roob uu siiyey.
Daahir Rayaale Kaahin ayaa u alla baryey in dadka abaartu saamaysay uu ilaahay roob ku maansheeyo, isla markaana dad, xoolo iyo dugaagba uu ilaahay roob siiyo.
“Ilaahay roob ha inoo keeno, ilaahay abaartan umadda ha ka soo furto, ilaahaay roob anfaca xayawaankiisa, Bani’aadankiisa, oo degdeg ah ilaahay ha inoo keenno, ilaahow naxariistaada, ilaahow waan ku baryeynaa, ilaahow naga aqbal”ayuu madaxweynihii hore ee Daahir Rayaale Kaahin umadiisa u baryey inuu abaarta ka jabiyo.
Mar la isku dayey in wax laga waydiiyo xaaladda wadanka iyo doorashooyinka soo socda sida uu arko, waxa uu yidhi “Somaliland khayr baan u rajaynayaa, doorasho fiicana inay u dhacdo, kii ilaahayna gartayna uu ku soo baxo”
Daahir Rayaale ayaa jawaabtaasi bixiyey isagoo socod ku jira, waxaana ka gaabsaday inuu war dheer ka bixiyo mudadda uu maqnaa iyo xaaladda wadanka uu ku jiro sida uu arko, kaliya waxa uu ka hadlay abaarta jirta.